Ikhamera efihliweyo yePen Video - Rekhoda i-90Mins, SDCard 32GB Max (SPY008) | Izisombululo ze-OMG
Ikhamera ye-OMG efihliweyo yeKhamera yeVidiyo-Rekhoda ukuya kuthi ga kwi-90Mins, kwi-SDCard 32GB Max (SPY008)
yeeModare: Imodi ye-1 ikuvumela ukuba uthathe isithombe ngokukhululekile kwaye ubhale izandi lula ukuyigcina kwikhadi le-sd, tshintshela kwimodi ye-2 yokurekhoda kwevidiyo uze ulondoloze kwikhadi le-sd. Jonga zonke iifayile zakho kalula kule khadi, sebenzisa umfundi wekhadi, okanye faka nje ipeni kwikhompyutheni yakho.
Akukho Software: le ipenethi yokuhlola i-PC kunye ne-Mac Iyahambelana. Umhla weesitampu zingeniswa njengeengongoma zenkcazelo kuyo nayiphi na imifanekiso okanye imifanekiso, ngoko ukulungiswa kwedatha yakho yimpepho. Ikhamera yethu yomnxeba yenza ukuba ilandele imilinganiselo ephezulu yokuvelisa.
Isisombululo esiphezulu seSithombe kunye neVidiyo: I-HD epheleleyo 1920x1080p IVIDIYO & 2560x 1920p PHOTO. I-HD epheleleyo ye-9712 lens, i-8 mega pixels, i-hardware ifinyelela kwi-HD epheleleyo. Ukucofa okukodwa kunye kunye iqhosha elilodwa likuvumela ukuba uqale / uyeke ukurekhoda ividiyo ngokukhawuleza.
battery: Indawo yethu eyakhelweyo, eyi-100% egcwalisekayo, amandla aphezulu ebhetri yeLithium (DC-5v) edlula nayiphi na enye ipeni yokurekhoda ekhoyo. INGXELO NANGONA XA UPHUMILE KWI GUMBI.
Le ipeni engaqhelekanga ngokupheleleyo. Ewe ayisetyenziswanga ukubhala kuphela kodwa ikwakhelwe ngaphakathi kwi-DVR (iRekhodi yeVidiyo eDijithali) enekhamera ye-HD enokusetyenziselwa ukubamba / ukuvelisa iifoto zesisombululo esiphakamileyo kunye nevidiyo. Ngokwenene yeyona khola ipholileyo yekhamera eyingqondi yokujonga kunye nokufaka nayiphi na imeko okanye njengesipho esihle.
Hlola iRekhodi yePomera yekhamera ye-HD 1080p HD
Ukuhlaja / Idatha yeKhondi ye-USB yokwandisa
Yisebenzise ngesandla kwiNdlela yokuLinda ukuze ukwazi ukwenza ifilimu nokuba awukho
Unika Imizuzu engama-60 ukuya kwengama-90 umsebenzi wokubamba idijithali.
Imemori: I-slot ex-slot ye-SD / TF imemori khadi yememori 32GB
Sebenzisa iimifanekiso ezisekhoyo, ividyo, okanye njenge-flash drive yokugcina i-flash drive.
Kuquka ukuhlawula / iDatha yeKhonketho ye-USB.
Uhlobo lwe-USB: I-port standard ye-USB.
Inkqubo yoNkxaso: Inkxaso WINDOWS98 / 98SE / ME / 20000XP / MAC OS / LINUX kwaye ngokuzenzekelayo ukwahlula inkqubo yokusebenza, faka i-drive ehamba phambili, akufuneki ukufaka ngesandla (ngaphandle kweWINDOWS98).
I-SPY008 -Ikhamera yePen
13984 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-2 Namhlanje